दुई प्रयोगशालाका दुई थरी रिपोर्ट : जनकपुरले पोजिटिभ देखाएको भोलिपल्ट हेटौडाले नेगेटिभ देखायो – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Health/दुई प्रयोगशालाका दुई थरी रिपोर्ट : जनकपुरले पोजिटिभ देखाएको भोलिपल्ट हेटौडाले नेगेटिभ देखायो
१६ असार । रौतहटको पाँच जनामा कोरोना संक्रमणमा पुष्टि भएको भोलिपल्टै सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ । जिल्लाको स्वास्थ्यका कार्यालयमा कार्यरत ५ जना कर्मचारीमा सोमबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो ।
मलाई बचाउनुहोस् …. २१ बर्से नेपाली युवक जिबन र मृ#त्यु संग लडिरहेको छन् ( भिडियो सहित )
यति सानो फुलको कोपिला नि’मोठियो मन्दिर भित्रै ! आ’रोपित राजेन्द्र बोहराको अर्को कु’कर्म बाहिरियो-[भिडियो सहित]